ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြောသင်ခန်းစာ (အပိုင်း ၃) - Myanmar Network
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြောသင်ခန်းစာ (အပိုင်း ၃)
Posted by zar ni (My Way!) on April 4, 2013 at 18:38 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
11. PRESENT THE FIRST ITEM ( ပထမအချက်၊ ကိစ္စ ကိုတင်ပြခြင်း)
Let’s start by the very beginning. France is our top priority.
First things first. Now we’ll discuss this week’s problem.
Item one in our agenda will be corporate responsibility.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲက ပထမအချက်က အသင်းအဖွဲ့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Point A is our relationship with the government.
The opening issue today is worker benefits.
ဒီနေ့ အဖွင့်ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ ကတော့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
12. PRESENT THE NEXT ITEM ( နောက်ထပ် အချက်၊ ကိစ္စ ကိုတင်ပြခြင်း)
Let's move onto item two.
We can now (discuss)
We can now discuss the next topic.
နောက်အကြောင်းအရာကို အခု ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။
We need to go on. Chapter B deals with economics.
ဆက်သွား(ဆွေးနွေး)ဖို့လိုပါတယ်။ အခန်း ခ သည် ဘောဂဗေဒ အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။
The next item on my list will only takeafew minutes.
ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်စာရင်းထဲက နောက်တစ်ချက်ဟာ မိနစ်အနည်းသာကြာပါမယ်။
Shall we continue? The second subject concerns our own future.
ကျွန်တော်တို့ဆက်(ဆွေးနွေး)ကြမလား။ ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
13. PRESENT EVIDENCE FORMALLY (သက်သေသာဓကများကို ရှင်းလင်းခြင်း)
I’d like you to see this graph.
လူကြီးမင်းတို့ကို ဒီဇယား(ဂရပ်) လေးကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Let me show you our new product line.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်အသစ် ကို ပြပါရစေ။
Please observe how the new design is more aerodynamic.
ဒီဇိုင်းအသစ်ဟာ ဘယ်လိုပိုပြီး အယ်ရိုဒိုင်းနမစ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေ့လာအကဲခတ်ကြည့်ပါ။
** Aerodynamics အယ်ရိုဒိုင်နမစ်
၁။ လေထဲ၌ ဖြတ် သန်းသော အရာဝတ္ထုပေါ်တွင် သက်ရောက်သောအားများကို လေ့လာသော သိပ္ပံပညာရပ်။ အယ်ရိုဒိုင်နမစ်ပညာ။ ၂။ အရာဝတ္ထု တစ်ခု၏ လေတွင်ဖြတ်သန်းနိုင်မှု ဂုဏ်သတ္တိ
If you watch this video closely you’ll see it was filmed lat year.
ဒီဗွီဒီယိုကို သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် မနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီပုံစံကားချပ်/ဇယားကွက် ကို တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါ။
14. PRESENT EVIDENCE LESS FORMALLY (သက်သေသာဓကများကို ပိုအရပ်သုံးဆန်စွာ ရှင်းလင်းခြင်း )
Just look over here. This is the new tractor.
Can you see Joe? He’s the third from the left.
ဂျိုးကို မြင်ရလား။ ဘယ်ဘက်ကနေရင်သုံးယောက်မြောက်လေ။
Watch this scene. Can you spot our product in the background?
ဒီပြကွက်ကလေး ကြည့်လိုက်။ နောက်ခံထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ရှာတွေ့နိုင်လား။
We want you to see the difference from the old to the new edition.
ထုတ်ဝေခြင်း အသစ်နဲ့အဟောင်းကြား ကွာခြားပုံကို မြင်စေချင်ပါတယ်။
Here you have the first picture of my wedding.
ဟော့ဒီမှာ ကျွန်တော့်မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ ပထမဆုံးဓါတ်ပုံပဲပေါ့။
Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ်အား ရည်ညွှန်းကိုးကားပါသည်။ Original E-book အား ဤ link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်စကား/အရပ်သုံး စကားပြောသင်ခန်းစာ (အပိုင်း ၁)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံး စကားပြော အပိုင်း (၄)
ပြောနည်း၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြော အပိုင်း(၅)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြော (အပိုင်း ၆)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အရပ်သုံး/အခန့်သုံးစကားပြော (အပိုင်း ၇)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အရပ်သုံး/အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော (၈)
ပြောနည်း၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း(၉)
ပြောနည်း၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း(၁၀)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း (၁၁)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း (၁၂)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော (အပိုင်း ၁၃)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော (အပိုင်း ၁၄)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြော (အပိုင်း ၁၅)
ပြောနည်း ၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း (၁၆)
ပြောနည်း၁၀၀ - အခန့်သုံး/အရပ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော အပိုင်း (၁၇)
Permalink Reply by htetwaizin on April 5, 2013 at 10:58
Permalink Reply by Win Thein on April 5, 2013 at 12:48
Hi.....This is one of your students who always observed that's your greatest site..Honestly I am not enough to thank you all the time for your wonderful and amazing Idea.. It made me more improve and inspire and be meaningful to me.. So, That's why I much appreciated you from the bottom of my heart even I am not enough to thank you. Let's me stop here my pretty writing.. Sincerely Your student....
Permalink Reply by Myint Myint Sein on April 5, 2013 at 15:46
Permalink Reply by nwe lay on April 5, 2013 at 15:52
Permalink Reply by myo minn htwe on April 6, 2013 at 11:20
Thanksalot. By the way,I would ask for some advice. I'd wantedaEnglish listening CD or recording foralong time because I'm bad at listening. So what sort is easily available in mandalay. In fact, I don't have any listening CD or recording. Please advice me what sort of CD I should start. I'm only too grateful to you. I look forwards your reply,sir.
Permalink Reply by Mr.Min Ai Mon Chan on April 7, 2013 at 21:14
Permalink Reply by win win shwe on April 8, 2013 at 16:51
Permalink Reply by နီတျာ on April 8, 2013 at 22:20
nice post... thx!
Permalink Reply by Than Than WIn on April 10, 2013 at 11:55